Shiinaha Spirulina Kiniinnada 500mg soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Boqor Dnarmsa
Spirulina waa microalgae buluug-cagaar ah, waxay ku baxdaa biyaha macaan iyo cusbada labadaba, oo iyaduna ah mid ka mid ah qaababka nolosha ugu da'da weyn Dhulka. Spirulina waa nafaqo aad u sarreeya, dhammaan algae buluug-cagaaran oo dabiici ah iyo il hodan ku ah fiitamiinnada, β-carotene, macdanta, chlorophyll, gamma-linolenic acid (GLA) iyo borotiin. Maadaama spirulina ay ku jirto qiimo nafaqo oo badan iyo faa'iidooyin caafimaad, waxaa loo tixgeliyey inay tahay cuntada ugu nafaqada badan adduunka.
[ORGANIC SPIRULINA EE HAINAN]:King Dnarmsa wuxuu leeyahay 1,000,000 m2 goob wax -soo -saar leh oo leh in ka badan 500 balliyada taranka microalgae ee jasiiradda Hainan, tas -hiilaadka wax -soo -saarkana waxaa caddeeyay HACCP, ISO 22000, BRC. Labadaba King Dnarmsa spirulina iyo chlorella oo ay shahaado siisay USDA National Organic Programme (NOP), Naturland, Certificate Halal Koser.
[TIROOYINKA SPIRULINA AAD U SAREEYA]:Spirulina waxay hodan ku tahay beta-carotene iyo asiidhka dufanka leh ee muhiimka ah GLA, birta, fiitamiinnada isku-dhafan, fiitamiinnada D, E iyo C, oo ay weheliso potassium, selenium, manganese, copper, chromium, magnesium, fosfooraska iyo zinc. Spirulina waxay taageero siisaa tamarta jirka.
Spirulina waxay hodan ku tahay borotiin ay ku jiraan dhammaan asiidhyada asaasiga ah. Waxay ka kooban tahay xaddiga ugu sarreeya ee borotiinka ee geed kasta, geedo ama xayawaan ku salaysan gm kasta. Waxay ka kooban tahay 70% isku -darka Vitamin B12, iyo 18 nooc oo ah Aamino Acids Aasaasiyadeed iyo antioxidants. Ku xooji tamartaada maalinlaha ah dhammaan fitamiinnada laga helo dabeecadda!
[Nadiifnimada- Wax kale maahee Spirulina]:Maaddooyinka ugu wanaagsan oo lagu beero biyo saafi ah, aag aan wasakhayn iyo iftiinka qorraxda ee jasiiradda Hainan. Spirulina ee King Dnarmsa ma aha GMOs, ma laha wax isku xira, ma laha midabbo macmal ah, dhadhan macmal ah ma laha, wax ilaaliyana laguma darin, kaliya waa nafaqada nafaqada leh ee spirulina. Sidoo kale, 100% vegan saaxiibtinimo.
[Dabeecadda Xisaabinta Superfood]:Machadka cilmi baarista algae ee King Dnarmsa, oo ah mid ka mid ah hay'adaha cilmi -baarista algae ee dalka, kaliya ma xallin dhibaatooyin farsamo oo badan xagga taranka, badeecadaha cusub iyo horumarinta geeddi -socodka, laakiin sidoo kale wuxuu si firfircoon u fuliyay iskaashi farsamo iyo is -weydaarsi shisheeye. Waxay wadashaqeyn la yeelatay jaamacadaha gudaha iyo machadyada cilmi-baarista ee caanka ah waxayna heshaa tiro ka mid ah badeecadaha cusub iyo shatiyada iyo natiijooyinka kale ee hantida aqooneed.
Waxay ku koraan biyo leh pH (alkaline) sare ka dib marka la goosto, waxaad ka iibsan kartaa spirulina kiniin, jajab, budo iyo qaabab dareere ah. Oo hadda guud ahaan waxaa maanta loogu yeeraa “superfoods”.
Spirulina- Cunto Dhamaystiran
Gaar ahaan, spirulina waxaa ka buuxa dhammaan nafaqooyinkan muhiimka ah ee taageeri kara caafimaadkaaga.
Beta-carotene- Spirulina waxay leedahay 10 jeer beta-carotene ee karootada, taas oo noqon karta antioxidants.
Borotiin dhammaystiran- Spirulina wuxuu u dhexeeyaa 65 ilaa 75% borotiin wuxuuna ka kooban yahay dhammaan sagaalka asiidh ee asaasiga ah.
Aashitooyinka Dufanka Muhiimka ah - Gamma linolenic acid (GLA), oo ka mid ah asiidhyada dufanka lagama maarmaanka ah, ayaa laga helaa spirulina.
Fiitamiinada- Fiitamiinnada B, fiitamiin C iyo E dhammaantood waxay ku jiraan spirulina.
Macdanta- Spirulina waa il hodan ku ah potassium, iyo sidoo kale kalsiyum, chromium, naxaas, bir iyo magnesium.
Phytonutrients- Spirulina waxay leedahay nafaqooyin ku saleysan dhirta oo ay ku jiraan chlorophyll, polysaccharides, sulfolipids, iyo glycolipids.
Phycocyanin- Soosaar u gaar ah spirulina, oo la og yahay inay taageerto jawaab -celinta bararka oo caafimaad leh waxayna leedahay saamayn badan oo ka -hortagga antioxidant.
Dayactirka maalinlaha ah, qiyaasta maalinlaha ah ee spirulina waa 1-3 garaam waxayna muujin doontaa inay xoogaa saamayn ah yeelanayso.
Chlorella vs Spirulina: Kala duwanaanshaha
Waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga iyo labadan cunto ee aadka u faa'iido badan?
Chlorella waa algae biyo -macaan oo cagaaran oo aan hoy lahayn kaas oo hodan ku ah borotiinka, fiitamiinnada (oo ay ku jiraan fitamiin B12), macdanta (gaar ahaan birta), amino iyo asiidhka nucleic. Chlorella algae waxay ku faantaa maadada chlorophyll sare oo ka caawisa nadiifinta dhiiga iyo unugyada, taasoo ka dhigaysa mid si gaar ah waxtar ugu leh sun -saaridda. Sidoo kale, Chlorella waxaa ku jira Curiye Kobcin oo gaar ah kaas oo kaa caawin kara hagaajinta dhaawaca unugyada dareemayaasha.
Spirulina waa algae biyo-macaan oo buluug-cagaaran ah oo ay ka buuxaan borotiin, fiitamiinno (oo ay ku jiraan fiitamiinnada A, B1, B2, B6 iyo K), macdanaha muhiimka ah (oo ay ku jiraan birta, kaalshiyamka iyo magnesium), raadadka macdanta, asiidhyada dufanka ee muhiimka ah, asiidhka nucleic (labadaba RNA iyo DNA), polysaccharides iyo antioxidants. Gaar ahaan Spirulina waa il ka wanaagsan GLA (gamma-linoleic acid), dufan 'wanaagsan' oo lagama maarmaan u ah shaqada maskaxda iyo wadnaha.
Hore: Blue Spirulina (Phycocyanin) 2.11oz/60g
Xiga: Budada Spirulina 4.23oz/120g oo hodan ku ah Antioxidant